Ukuphucula ukuSebenza kweMagento kunye neZiphumo zeShishini lakho | Martech Zone
Ukuphucula ukusebenza kweMagento kunye neziphumo zakho zeshishini
Lwesine, ngoFebruwari 5, 2015 NgoLwesihlanu, Februwari 6, 2015 UTony Barbagallo
IMagento yamkelwe njengeqonga eliphezulu le-e-commerce, elinika amandla kwisinye kwisithathu kuzo zonke iiwebhusayithi zentengiso ezikwi-Intanethi. Isiseko sayo somsebenzisi kunye nenethiwekhi yonjiniyela yenza i-ecosystem apho, ngaphandle kobuchwephesha bobuchwephesha, phantse nabani na anokufumana indawo ye-e-commerce kwaye ibaleke ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, kukho icala eliphantsi: IMagento inokuba nzima kwaye icothe ukuba ayilungiswanga ngokufanelekileyo. Oku kunokuba kukucinywa okwenyani kwabathengi banamhlanje abakhawulezayo abalindele amaxesha okuphendula ngokukhawuleza kwiiwebhusayithi abazindwendwelayo. Ngapha koko, ngokuka Uphando lwakutsha nje oluvela kuClustrix, Iipesenti ezingama-50 zabantu baya kuthenga kwenye indawo ukuba iwebhusayithi ilayisha kancinci amaphepha.
Ukukhula kwemfuno yesantya sewebhusayithi kuye kwashukumisela ekuphuculeni ukusebenza kweMagento ukuya kuluhlu oluphezulu lwabaphuhlisi abaziingcali. Makhe sijonge iindlela ezintathu ezinokuthi ziphucule ukusebenza kweqonga labo laseMagento.
Phumeza iNethiwekhi yokuZisa isiqulatho (CDN)
Unxibelelwano lweeNethiwekhi ikuvumela ukuba ukhuphele imifanekiso yendawo yakho kunye nomnye umxholo omileyo kumaziko edatha asondele kubathengi bakho. Ukunciphisa umgama wokuhamba kuthetha ukuba umxholo uza kufika ngokukhawuleza. Kwangelo xesha, ngokukhuphela umxholo wakho kwiziko ledatha lakho lewebhu, ukhulula izibonelelo zokuvumela abasebenzisi abangakumbi ngaxeshanye, nangamaxesha angcono okuphendula iphepha. Umncedisi wakho wedatha usebenza kakuhle kwaye ngokufanelekileyo xa enokuhlala egxile ekudaleni, ekuhlaziyeni, ekuqinisekiseni nasekugqibeni imicimbi. Ukusingathwa kokufundwa kuphela kwindawo yogcino lwedatha kudala umthwalo ongafunekiyo kunye neebhotile zeendawo zorhwebo ezirhweba ngabantu abaninzi.
Lungiselela ngokufanelekileyo isiseko sedatha yakho
IMagento yenza imibuzo efanayo kwiserver yedatha ngalo lonke ixesha iphepha lijongwa, nangona kungekho lutshintsho lungako kule mibuzo ngokuhamba kwexesha. Idatha kufuneka ikhutshwe kwakhona kwidiski okanye kwimithombo yeendaba yokugcina, ihlelwe kwaye iqhathwe, emva koko ibuyiselwe kumxhasi. Isiphumo: ukuntywila ekusebenzeni. I-MySQL ibonelela ngeparameter yoqwalaselo eyakhelweyo ebizwa ngokuba yi-query_cache_size exelela iserver ye-MySQL ukuba igcine iziphumo zombuzo kwimemori, ekhawulezayo kakhulu kunokufikelela kwidiski.
Ukunciphisa izicelo, ukumiliselwa kweCDN kunye nokuqwalaselwa kweserver yedatha ye-MySQL, kufuneka kuphuculwe ukusebenza kweMagento; Nangona kunjalo kusekho amashishini amaninzi anokukwenza ukuphucula ukusebenza kwendawo ngokubanzi. Ukwenza njalo abaphathi besiza se-e-commerce kufuneka baphinde bavavanye kwakhona isiseko sedatha ye-MySQL ngokupheleleyo. Nanku umzekelo xa ubala i-MySQL ibetha eludongeni:
(Re) Vavanya ugcino lwedatha yakho
Uninzi lweziza ze-e-commerce ekuqaleni zisebenzisa i-database ye-MySQL. Liziko ledatha elivavanyiweyo elivavanywa ixesha kwiindawo ezincinci. Apho kungumbandela. Iziseko zedatha ye-MySQL zinemida yazo. Iinkcukacha ezininzi ze-MySQL azikwazi ukuhambelana neemfuno ezikhulayo zeewebhusayithi ze-e-commerce ezikhula ngokukhawuleza, nangona i-Magento isebenza kakuhle. Ngelixa iisayithi ezisebenzisa i-MySQL zinokukala ngokulula ukusuka ku-zero ziye kubasebenzisi abangama-200,000, banokukrwitshwa xa bekala ukusuka kubasebenzisi abangama-200,000 ukuya kuma-300,000 ngenxa yokuba bengenako ukukala ngokunyuka ngomthwalo. Kwaye sonke siyazi, ukuba iwebhusayithi ayikwazi ukuxhasa urhwebo ngenxa yedatha engalunganga, eyona nto iphambili kwishishini iya kusokola.
Qwalasela isisombululo esitsha Ngethamsanqa, kukho isisombululo: Isiseko sedatha ye-NewSQL sigcina imixholo ye-SQL kodwa yongeza ukusebenza, ubungakanani kunye nezinto ezikhoyo ezingekhoyo kwi-MySQL. Ugcino lwedatha lweNewSQL luvumela amashishini ukuba afezekise intsebenzo abayifunayo kwizicelo zabo eziphambili, ezinje ngeMagento, ngelixa besebenzisa izisombululo ezinobuhlobo kubaphuhlisi esele bezinziswe kwi-SQL.
Sebenzisa indlela yokulinganisa -I-NewSQL yindawo yogcino lwedatha eqhayisa ngokusebenza ngokulinganisa okuthe tyaba, isiqinisekiso sentengiselwano ye-ACID kunye nokukwazi ukuqhubekeka nomthamo omkhulu wentengiselwano ngokusebenza ngokukuko. Ukusebenza okunje kuqinisekisa ukuba amava okuthenga kubathengi ayinangxaki ngokunciphisa okanye ukuphelisa nakuphi na ukulibaziseka kwedijithali abanokukunyamezela ngenye indlela. Okwangoku, abenzi bezigqibo banokuhlalutya idatha ukuze baqonde iindlela zokujolisa ngokukodwa kubathengi ngamathuba okuthengisa kunye nokuthengisa.
Iindawo ze-e-commerce ezingalungiselelwanga azizukusebenza ngokufanelekileyo ukuba azixhobanga ukuphatha imithwalo enzima, ngakumbi ngamaxesha okonyuka kwezithuthi. Ngokusebenzisa isilinganisi sedatha se-SQL esikhulayo, esinganyamezeli mpazamo, unokuqinisekisa ukuba indawo yakho ye-e-commerce inokusingatha nasiphi na isixa sezithuthi phantse kuyo nayiphi na imeko, kunye nokubonelela abathengi ngamava okuthenga ngaphandle komthungo.
Ukusetyenziswa kwesiseko sedatha ye-SQL kukonyusa ukusebenza kweMagento. Isibonelelo esikhulu sedatha ekhutshiweyo ye-SQL kukuba inokukhula ngokufundwayo, ibhale, uhlaziyo kunye nohlalutyo njengoko amanqaku edatha kunye nezixhobo zongezwa. Xa ulwakhiwo lokulinganisa luyadibana nelifu, usetyenziso olutsha lunokufumana ngokulula ukongezwa kwabathengi abatsha kunye nokwandisa umthamo wentengiselwano.
Ngokufanelekileyo, isiseko sedatha seNewSQL sinokuhambisa ngokungafihlisiyo imibuzo kwiiseva ezininzi zedatha, ngelixa ngokuzenzekelayo zilungelelanisa umthwalo womsebenzi kwindawo yakho. Nanku umzekelo wedatha yeNewSQL, iClustrixDB. Isebenzisa ii-node zeseva ezintandathu, isasaza zombini ukubhala kunye nemibuzo yokufunda kuyo yonke imimandla emithandathu, ngelixa ugcina ujonge kufutshane ekusebenziseni ubutyebi benkqubo kunye namaxesha okuphumeza imibuzo:
Qinisekisa ngamava afanelekileyo omthengi
Ukuba ungumnini weshishini, kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukuqinisekisa amava e-commerce afanelekileyo kubathengi bakho, nokuba ingakanani na indawo ephethe indawo yakho kwindawo ethile nangaliphi na ixesha. Emva kwayo yonke loo nto, xa kufikwa kukhetho lokuthenga kwi-Intanethi, namhlanje abathengi banokukhetha okungapheliyo-amava amabi angabagxotha.
tags: IqelaMagentoukusebenza magentomysqliindabaqlukwenza
UTony ngu-CMO we IClustrix, Isiseko sedatha ye-SQL ekhokelweyo yenzelwe ilifu kunye nesiseko sedatha sokuqala esakhelwe ngokukodwa ukuhlangabezana nokukhula kwengeniso, ukusebenza kunye neemfuno zokufumaneka kweendawo zorhwebo ze-e zanamhlanje.
Unobangela kunye nokuKhokelela kwiziphumo zeMicimbi yeDatha
Izizathu ezi-8 zokuba isiCwangciso sakho sokuHlawula ngokuCofa sisilele